ANTSIRABE - OZININA ETHANOL : Tsy hianatra ny mpianatra sasany, ny mpiasam-panjakana hiasa amin’ny ampahany
Ainga vaovao hampandrosoana ny Faritra Vakinankaratra ny fitsanganan’ny ozinina fanodinana Ethanol etsy Mandaniresaka Antsirabe. 16 mai 2017
Ny 19 Mey izao no hanokanana izany ozinina izany amin’ny fomba ofisialy izay anasana ny vahoakan’Antsirabe tsy an-kanavaka.
Lanonam-be no entin’ny Faritra Vakinankaratra hitokanana amin’ny fomba ofisialy ny ozinina mpanamboatra entona fandrehitra azo avy amin’ny alalan’ny zavamaniry na ny ethanol, etsy amin’ny Fokontany Mandaniresaka amin’ny 19 mey izao.
Tompon’andraiki-panjakana maro izay tarihin’ny Filoham-pirenena ankoatra ireo manam-pahefana eto Antsirabe no hanome voninahitra izany lanonam-
Ho tonga hanotrona izany ihany koa ny fianakaviamben’ny Fiangonana Loterana Malagasy izay tarhin’ny Filohany, Rakotonirina David. Ankoatra izay dia misy amin’ireo mpianatra manovo fianarana amin’ny sekolim-panjakana toy ny Lisea André Resampa Antsirabe no tsy mianatra amin’io fotoana io fa hanatrika ity lanonana ity. Ny mpiasam-panjakana ihany koa dia nilaza ny hanatrika ity lanonana ity saingy misy kosa ireo mpiandry raharaha, ka asa amin’ny ampahany ihany no hita eny amin’ireo biraom-panjakana amin’io fotoana io.
Marihina fa ity ozinina ity no ozinina voalohany hanodina ireo vokatry ny tany ho lasa entona Fandrehitra eto Vakinankaratra. Malagasy no vy nahitana sy angady nananana izany orinasa izany ary Malagasy ihany koa no nikotrika ny fomba rehetra ahafahana manodina ity ozinina ity.
Fandaharan’asa iray ho fampandrasoana eo anivon’ny Fiangonana Loterana Malagasy izay novatsian’ny mpamatsy vola mahazatra no vy nahitana izany ka ny fanjakana Malagasy no miantoka amin’ny fampandehanana azy. Tafiditra ao anatin’ny vinan’ny fampandrosoana ny Faritra ity fananganana ozinina ity satria maro ny hahazo tombontsoa amin’izany.
Ny tantsaha dia hiezaka hampitombo ny vokany mba hahafahana mampihodina tsy an-kijanona ny ozinina ary an-kilany koa dia ho betsaka ireo tanora no hahazo asa. Tsy ny fary ihany mantsy no azo ahodina ho lasa Ethéanol fa ny Mangahazo sy ny katsaka ihany ary ny beteravy. Ankoatra izay dia ho voaaro ihany koa ny tontolo iainana satria tsy hisy intsony ny fikapana ala handrahoana sakafo fa samy hampiasa ny entona fandrehitra azo avy amin’ny Ethanol avokoa ny mponina rehetra.
2020-11-14 04:31:08 par Merziuz
11RUKm http://pills2sale.com/ viagra online